Garam Masala (သို. ) ဟင်းချက်မဆလာစပ်နည်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Garam Masala (သို. ) ဟင်းချက်မဆလာစပ်နည်း
အိန္ဒိယမှာတော့..ဒါကို Garam Masala လို.ခေါ်ပါတယ်..စစ်တမ်းကောက်မှု မှာသူတို.နိူင်ငံကထုတ်တဲ့ Sun ဆိုတဲ့တံဆိပ်ကပရိတ်သတ်ထောက်ခံမှုအများ
သူတို.ကအမဲသားမစားတော့ ၊ဆိတ်သား ၊ ကြက်သားတွေမှာသုံးသလို အမဲသားစားသုံးသူများကတော့..အမဲသားဟင်းမှာလည်းသုံးနိူင်ပါတယ်။
ကြက်သားဟင်းမှာ ၁ ဇွန်းဆိုရင် ဆိတ်သား ၊အမဲသားများ ၂ ဆသုံးနိူင်ပါတယ်
နံနံစေ့.............၂ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ဇီယာအမည်းစေ့. ဇွန်းဝက်( ......။.......)
ဖာလာမှုန်......... ဇွန်းဝက်(.......။.........) သို. ကြီးကြီး၎ လုံး
သစ်ကြပိုးခေါက်...၄x ၁ လက္မ တစ်ခု
ကရဝေးရွက်.......ဇွန်းဝက်(သို.) ၁၀ ရွက်ခန်.
ဖာလာစေ့ ၊ သစ်ကြပိုးခေါက်တွေကိုတော့..ငရုတ်ကောင်း ၊နံနံ စေ့တို.လိုအရွယ်ညီမျှအောင်ဖဲ့ခြွေပေးပါ။
(၁၅) မိနစ်ခန်. လှော်ပေးပြီးအအေးခံထားပါ။
အေးသွားရင်မှုန်.နေအောင်ထောင်း(သို.) စက်မှာ ကြိတ်ပေးပါ။
ကိုထည့်ပေါင်းပါ..။ All in 0ne ပေါ့..။
နနွင်းမှုန်. ........၁ ဇွန်း( ထမင်းစားဇွန်း)
ငရုတ်အစပ်မှုန်. .၂ ဇွန်း(........။........)
စမုန်စပါးစေ့.......၁ ဇွန်း (........။.......)
Photo Credit ..Google Search